Maraykanka Oo Shacab ku dilay Duqeymaha uu ka geysanayo Soomaaliya.(Baaritaan Cusub) – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Maraykanka Oo Shacab ku dilay Duqeymaha uu ka geysanayo Soomaaliya.(Baaritaan Cusub)
On Sep 25, 2019 700 0
Markazka Diraasaadka iyo baaritaannada ee tv-ga TRT World ayaa soo saaray warbixin dheer oo uu kaga waramay duqeymo sanadkan 2019 diyaaradaha Maraykanku ka fuliyeen qeybo kamid ah koonfurta Sooomaaliya.
Diraaasadan oo ka kooban illa 40 page, waxay diiradda saartay illa saddex kiis oo duqeymo ah, oo diyaaradaha Maraykanku ka geystaan gobolka Shabeellaha hoose, ayna ku waxyeeloobeen dad maati shacab ah oo aan waxba galabsan.
Duqeymaha baaritaanka TRT lagu xusaya waxay dheceen intii u dhexeysa January iyo Marso ee sanadkan 2019, waxaana ciwaan looga dhigay diraasadda “ waxaan maqalney guuxa diyaaradda”.
Qaar kamid ah dadkii goobjooga ahaa, kana badbaaday duqeymahaas ayuu markazku wareystay, kuwaas oo hadda ku sugan kaamam barakacayaal ah oo ku yaala magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
11-ki Marso, sanadkan 2019-ka, diyaaradaha Maraykanka waxay duqeymo ka geysteen deegaanka Daaru Salaam ee hoostaga degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha hoose.
Duqeymaha ayaa yimid, kadib markii ciidamada Maraykanka oo ay wehlinayaan ciidamo Soomaali ah ay duulaan habeen guureyn ah kusoo qaadeen deegaanka, waxaana ay la kulmeen iska caabin adag oo uga timid dhanka ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.
Diyaaradaha Maraykanka oo hawada ku jiray ayaa xilligaas dhowr gantaal ku riday bartamaha magaalada, iyagoo beegsaday xarumo ganacsi iyo xaafo ay dad shacab ah ku noolaayeen.
Abshiro, waa haweeney Soomaaliyeed oo ka badbaaday duqeyntaas, balse ku weysay xubno muhiim ah oo katirsan qoyskeeda, waxay la hadashey TRT world, iyadoo ka sheekeysay wixii habeenkaas dhacay.
“ waan hurdeynay, marka ay diyaaraduhu soo galeen hawada oo ay gantaalo nagu soo rideen, 3 ruux oo kamid ah qoyskeyga ayaa halkaas ku dhintay, oo kala ahaa wiil aan dhalay, mid aan eedo u ahay, iyo ku kale oo aan ay walaasheyda dhashey, waxaan halkaas ku weynay wax weliba oo qaali ah, deegaankana waan isaga soo guurney markii aan meydadka aasney, hadda waxaan ku noolnahay kaamka Weydow, waxaan heysana majirto” ayay tiri Abshiro.
Sida ay cadeyneyso baaritaanka TRT world, waxaa duqeyntaas ku dhintay ugu yaraan 7 ruux , oo saddex kamid ah ay ahaayeen xubnaha qoyska Abshiro.
“Maraykanu annagu ayuu na beegsaday, maxay raadinayeen xilligaas? Xilligaas goobta ma joogin Al-Shabaab, inbadan oo kamid ah ehelkeena iyo xoolaheena weerarkaas ayaa lagu dilay” ayay hadalkeeda sii raacisay Abshiro.
Taliska Africom oo uu markazku la xiriiray, horeyna u sheegtay in duqeyntaas aaney dad shacab ah waxa ku noqon, ayaa weli kusii adkeysanaya in duqeymaha uu ka geystay Soomaaliya labadii sano ee lasoo dhaafay ay ku dhinteen oo keliya labo qof oo shacab ah.
Cabdi Nuur Daahir, oo kamid ah baariyaasha diraasadda soo saaray, ayaa waraysi uu bixiyay, wuxuu ku sheegay in duqeymaha Maraykanku ay sii kordheen tan iyo markii Aqalka cad la wareegay Donald Trump, duqeymahaasna ay dhaliyeen dhibaatooyin badan
Halkan ka dhagayso Warbixin ku saabsan Diraasadda Markazka TRT World ee duqeymaha Soomaaliya